Madaxweynaha Jabuuti oo si diiran loogu soo dhaweeyey Muqdisho (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Madaxweynaha Jabuuti oo si diiran loogu soo dhaweeyey Muqdisho (Sawirro)
March 16, 2019 admin584
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Geelle oo booqasho rasmi ah oo labo maalmood ah ay uga bilaabatay dalka ayaa waxaa Garoonka Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubno ka tirsan Golayaasha Dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Gobolka Banaadir.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo galbiyay Aqalka Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya halkaas oo ay wadahadallo labo geesood ah kula yeelan doonaan madaxda Qaranka.
Maxaa ugu muhiimsan Socdaalka Madaxweyne Geelle
Madaxweyne Ismaaciil ayaa booqashadiisu qaadan doontaa 2 Maalmood.
Wuxuu wada hadal albaabadu u xiran yihiin la yeelan doonaa Madaxda Soomaaliya, iyagoo ka arinsan doonaa siyaasadda geeska Afrika, iyo isgarabsiga labada dal.
Mr. Geelle ayaa xarigga ka jari doona dhismaha Saafaradda Jabuuti, oo uu dhagax dhigay Feberaayo 2017.
Sidoo kale wuxuu booqan doonaa Magaalada Beledweyne oo saldhig u ah ciidanka Hiilwalaal ee ka socda Jabuuti oo qeyb ka ah AMISOM.
Xildhibaanada iyo Wasiirada Socdaalkiisa ku wehliya ayaa shirar la qaadan doonaa dhiggoodda Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle waxaa wafdigiisa ka mid ah Fanaaniin caan ah sida Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal, sidoo kale waxaa ku jira Fanaanka reer Jabuuti Cawaale Aadan.
Ninkii geystay Xasuuqii New Zealand oo maxkamad lasoo taagay
AKHRISO: Soomaaliya oo beenisey eedeymo uu jaraa’idka Indian Ocean baahiyay
July 24, 2017 Saadaq Laki
Taliyaha Xoogga dalka oo tababar usoo xiray ciidamo (Sawirro)